Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Ibali lethu loThando kunye neIqithi zaseSychelles ezihle
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Owayesakuba yingcali kwezokhenketho, uRoger Porter-Butler, kunye nenkosikazi yakhe, uJoan, baphinda bakhumbula izinto ezintle eSeychelles, ikona yabo encinci yeparadesi ukusukela ngo-2011.
Ngo-1978 xa ukhenketho lwalulutsha kwindawo eyayifikelela kuyo uLwandlekazi lwaseIndiya, uRoger wakhangiswa kwangoko ziziqithi zaseSeychelles.
Wazithembisa ukuba uza kubuya ahambe kunxweme oluyinkqantosi lwaseAnse Lazio ePraslin.
Kwakungeke kube ngo-2011 ukuba abuye kunye nenkosikazi yakhe kwiminyaka eyi-10 betshatile.
Behleli kwigumbi labo lokuhlala elimnandi eSomerset kuMazantsi-ntshona eNgilane, uRoger noJoan Porter-Butler, isibini esitshatileyo esidla umhlala-phantsi, badibana neqela laseSeychelles ngolwesiThathu emva kwemini.
Intlanganiso, eqhutywa nge-zoom yeqonga elikwi-intanethi, ngoncedo lwe-COVID-19 kunye nezithintelo zokuhamba kwayo, ibingomnye wezo zidibaniselwano kanye, ukuhambisa ababhali ngebali elihle lothando lwePorter-Butlers kunye neSeychelles.
URoger ubalise eyakhe yokuqala iinkumbulo zeSeychelles emva phayaa ngo-1978 xa ukhenketho lwalulutsha kwindawo yolwandlekazi lwaseIndiya - isikhululo seenqwelomoya sasisandul 'ukuvulwa ngo1972. URoger wakhumbula ngemvakalelo yokuba wayethabathekile bubuhle besiqithi sase-Anse Lazio nomgubo othambileyo. Iisanti zenziwe ngamatye egranite.
“Utyelelo lwam lokuqala eSeychelles luthathe iiveki ezi-2 kwaye bendonwabile ngokuba kwindawo entle kangaka, ngakumbi ukuba nonxweme lwe-Anse Lazio ePraslin kum usuku lonke. Kulapho ndathembisa khona ukuba ndizakubuyela hamba kunxweme olungenabantu kwakhona, ”watsho uRoger.
"Ukuba kumzi mveliso wokuhambahamba kunye nokuhambahamba emhlabeni, ndizigcine iinkumbulo zeSeychelles entliziyweni yam kwaye bendisazi ukuba ndiza kubuya."
Iminyaka idlulile kodwa uRoger akazange alibale ngeSeychelles, kwaye ngo-2011, ishumi leminyaka emva kokutshata nenkosikazi yakhe entle, uJoan, wamthabatha waya kwindawo eyayiza kuba yenye yeendawo zabo abazithandayo.
Esi sibini sigqibe kwelokuba sifumane omnye ummangaliso waseSeychelles, sizinzise eli xesha kwisiqithi saseSte Anne kwaye ngexesha lohambo, babhiyozela iminyaka eli-10 ebalulekileyo kulwalamano lwabo kwihotele i-Four Seasons eMahé.
Ukukhumbula kwakhona, uRoger noJoan bathetha ngothando lwabo ngotyelelo lwabo eMoyenne Island, isiqithi esineehektare ezingama-24 eziyinxalenye yeSainte Anne National Park, apho badibana khona noBrendon Grimshaw, owayengumhleli wephephandaba laseBritane, owayengumnini wesiqithi ngelo xesha.
Umnumzana Grimshaw utyikitye incwadi yakhe ethi “Ingqolowa yentlabathi” ngenqaku elikhethekileyo esi sibini simemayo kwakhona kutyelelo lwabo lwexesha elizayo.